Warshad tamarta Haydarooliga: howlgalka iyo noocyada | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | tamarta Haydarooliga
Maanta waxaan u nimid inaan si qoto dheer uga hadalno mid kale oo ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo. Waxay ku saabsan tahay tamarta korontada laga dhaliyo. Laakiin dooni mayno inay ka hadasho lafteeda, laakiin waxay ku saabsan tahay warshadda korontada dhalisa halka laga soo saaro lagana fuliyo. Warshad koronto ka dhalisa ayaa muhiimad weyn u leh jiilka tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee ka soo baxa kaydadka biyaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay adeegsiyo iyo faa iidooyin kale oo badan dadweynaha.
Maqaalkan waxaan ku falanqeyn doonnaa dhammaan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka ay leeyihiin tamarta korontada waxaana arki doonaa sida ay u shaqeeyaan. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Sii wad akhriska.
1 Waa maxay warshad biyo-koronto dhalisa
2 Faa'iidooyinka geedka korontada laga dhaliyo
3 Faa’iido darrooyinka dhirta korantada
4 Noocyada dhirta korontada ku shaqeysa
4.1 Saldhigga korontada ee hareeraha wabiga
4.2 Warshad Hydroelectric oo leh keyd kayd ah
4.3 Saldhigga bamka Hydroelectric
Waa maxay warshad biyo-koronto dhalisa
Markii aan hawl galino warshad koronto ka dhalisa, waxa aan rajeynayno ayaa ah inaan awood u yeelan karno inaan tamar ka soo saarno biyaha ku kaydsan baraagaha. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa abuurid tamarta farsamada oo u beddelaya tamar koronto.
Nidaamka ururinta biyaha ayaa la soo saaray si loo abuuro sinaan la'aan asal ahaan ka soo baxda tamar tamar leh. Biyahaas ayaa la tuuray si loo helo tamar iyada oo loo marayo kala duwanaanta culeyska. Markay biyuhu maraan marawaxadaha, waxay soo saartaa dhaqdhaqaaq wareeg ah oo kaxeeya beddel oo u beddelaya tamarta farsamada tamarta korantada.
Faa'iidooyinka geedka korontada laga dhaliyo
Sidaad u jeeddo, tani waxay faa iido weyn u leedahay dadka oo kaliya kuma eka heerka tamarta. Aynu kooxeyno faa'iidooyinkaas si aan mid mid ugu falanqeyno:
Waa tamar la cusboonaysiin karo. Si kale haddii loo dhigo, wakhtigeedu kuma dhammaado sida shidaalka qashinku u kari karo. Biyaha sideedaba ma xadidna, laakiin waa run in dabeecadda si joogto ah roob noo keento. Sidan ayaan ku soo kaban karnaa oo aan u sii wadaynaa isticmaalkeeda il tamar.
Ahaanshaha gebi ahaanba dabiici ah lana cusboonaysiin karo, ma wasakhaynayso. Waa tamar nadiif ah.
Sidii aan horay u sheegnay, kaliya nama anfacayso xagga tamarta, laakiin sidoo kale waxaa lagu daray ficillo kale sida ka hortagga daadadka, waraabka, biyo-bixinta, jiilka waddooyinka, dalxiiska ama dhir-beerista
In kasta oo aad u malaynayso, kharashka hawlgalka iyo dayactirka labadaba wuu hooseeyaa. Marka biyo-xidheenka iyo dhammaan nidaamka qabashada la dhiso, dayactirku ma aha mid adag haba yaraatee.
Si ka duwan noocyada kale ee ka faa'iideysiga tamarta, shaqooyinka la qabtay si looga faa'iideysto tamarta noocan ah waxay leeyihiin nolol waxtar leh oo dheer.
Mashiinka ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro tamar. Marawaxadaha waa iska fudud in la isticmaalo, aad u ammaan badan oo hufan. Taas macnaheedu waa in kharashka waxsoosaarku hooseeyo oo si dhakhso leh loo bilaabi karo loona joojin karo.
Si dhif ah ayey u baahan tahay ilaalin dhanka shaqaalaha, maadaama ay tahay meel fudud in la fuliyo.
Xaqiiqda ah inay tahay tamar la cusboonaysiin karo oo nadiif ah oo leh kharashyo hoose ayaa horeyba uga dhigaysa tamar tartan ku leh suuqyada. Waa run inay leedahay cillado qaarkood sidaan hoos ku arki doonno, in kasta oo faa'iidooyinka la helay ay aad ugu habboon yihiin.
Faa’iido darrooyinka dhirta korantada
Layaab ma leh, awoodda noocan oo kale ah maahan dhammaan faa'iidooyinka. Waxay leedahay xoogaa dib u dhac ah markay tahay soo saarista waana in sidoo kale la tixgeliyaa haddii loo dhigayo inay bixiso dad ama, ugu yaraan, inay gacan ka geysato daboolida baahida tamarta.
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno faa'iido darrooyinka noocan ah:
Sidii la filayay, warshad koronto ka dhalisa waxay u baahan tahay dhul ballaaran. Goobta la dhigayo waa inay lahaato astaamo dabiici ah oo u oggolaanaya tamarta in si habboon looga faa'iideysto.
Kharashaadka dhismaha ee warshadda korantada korantada ayaa inta badan sarreeyaMaaddaama ay tahay inaad diyaarsato dhulka, dhiso nidaamka gudbinta korantada iyo tamarta ayaa luntay geeddi-socodkan oo dhan oo aan dib loo soo celin karin.
Marka la barbardhigo dhirta kale ama noocyada kale ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo, dhismaha warshadu wuxuu qaadanayaa waqti dheer.
Waxay kuxirantahay qaababka roobka iyo baahida dadweynaha, jiilka tamarta had iyo jeer ma aha mid joogto ah.
Tan dambe waxay ku dhacdaa noocyo badan oo tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Waa mid ka mid ah dhibaatooyinka inta badan ay tahay in lagu daboolo waaxda la cusboonaysiin karo. Sida awoodda dabayshu u baahan tahay dabayl iyo qoraxda Kadib saacado badan oo qorax ah, Haydarooliga waxay ubaahanyihiin roob badan si ay udhacaan biyo-dhac wanaagsan.
Si yaraantaan looga dhigo mid yar, waa inaad taqaanaa sida loo doorto goobta si aad u wanaagsan. Tusaale ahaan, isku mid maahan in geedka la dhigo meel roobku aad ugu yar yahay cimiladuna guud ahaan way ka qalalan tahay in la dhigo meel roob badan leh. Marka sidaas la sameeyo, wax soo saarka tamarta ayaa noqon doona mid aad u jaban oo aad u tiro badan.
Noocyada dhirta korontada ku shaqeysa
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah dhirta korontada laga dhaliyo iyadoo kuxiran habka ay u shaqeeyaan.
Saldhigga korontada ee hareeraha wabiga
Waa nooc ka mid ah dhirta oo aan ku urursanayn xaddi badan oo biyo marawaxadaha, laakiin taa beddelkeeda ka faa'iideyso qulqulka socodka ee wabiga waxaa jira waqtigaas. Maaddaama xilliyada sannadka ay socdaan, qulqulka webiga sidoo kale wuu is beddelaa, taasoo aan suurtagal ka dhigayn in biyo xad-dhaaf ah lagu lumiyo biyo-xidheenka oo buux dhaafiyay.
Warshad Hydroelectric oo leh keyd kayd ah
Midkani wuxuu ka duwan yahay kii hore, midkani wuxuu leeyahay barkad ay ku kaydsan yihiin biyaha kaydka ah. Kaydku wuxuu u oggolaanayaa xaddiga biyaha ee gaadha marawaxadaha in loo habeeyo qaab wax ku ool ah. Faa'iidada ay bixiso marka loo barbar dhigo tii hore ayaa ah, iyadoo had iyo jeer leh biyo xireen keyd ahaan, waxay soo saari kartaa tamar koronto sanadka oo dhan.
Saldhigga bamka Hydroelectric
Xaaladdan oo kale waxaan leenahay laba barkadood oo ku kala yaal heerar kala duwan. Waxay kuxirantahay baahida loo qabo tamarta korantada, waxay kordhiyaan wax soo saarkooda iyo inkale. Waxay sidan u sameeyaan sida isweydaarsiga caadiga ah. Markii biyaha ku kaydsan kaydka sare ay soo dhacaan, rog turbainka oo, marka loo baahdo, biyaha laga soo saaro haanta hoose si mar kale, ay dib u bilaabi karto wareegga dhaqdhaqaaqa.
Noocaan dhexe wuxuu leeyahay Faa'iidada in lagu xakamayn karo iyadoo loo eegayo baahida korantada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto dhirta korantada laga dhaliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » tamarta Haydarooliga » Warshad koronto ku shaqeysa: hawlgal iyo noocyo
Isbedelka Cimilada Spain